Madaxweyne Xasan Sheekh: Askarta la ruqseeyey wax shaqo ah uma heyn dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 25 February 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay askar farabadan oo dhawaan laga ruqseeyey ciidamada Soomaaliya, kadib markii sida taliska ciidamadu sheegay ay gudan waayeen shaqadii laga rabay.
Madaxweyne Xasan ayaa xusay in askarta la ruqseeyey yihiin kuwa aan wax shaqo ah u heyn dowladda Soomaaliya, sidaas darteedna aysan sax aheyn iney mushaar iska qaataan iyagoo guryahooda jooga.
“Askarta la ruqseeyey badankood waxey ahaayeen kuwo aan wax shaqo ah u heyn dowladda Soomaaliya, dowladduna maaha hay’ad samafal” ayuu madaxweyne Xasan oo tilmaamay in haddii ay jiraan shakhisyaad lagu qaldamay la saxayo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay askarta geboobay, askarta naafoobay iyo agoonta ay dhaleen askartii ku geeriyoodatayu dagaallada.
Wuxuu xusay madaxweynuhu in askarta geboobay loo sheegay iney yihiin howlgab, islamarkaana guryahooda lagu siinayo mushaarka, sidoo kale wuxuu tilmaamay in askrta ku naafoobay dagaaladii hore iyo kuwa hadda socda la siinayo mushaaraadkooda.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale cadeeyey in agoonta ay dhaleen askartii geeriyootay la siinayo $100-kii dollar ee la siin jiray aabayaashood sida uu yiri.
Madaxweynaha ayaa xusay in ciidamada la siiyo mushaar $100 dollar ah iyo $60 oo garaam ah, hase ahaatee wuxuu tilmaamay in mararka qaar mushaarku ka daaho askarta.
Dhawaan ayaa taliska milateriga Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay in la ruqseeyey boqolaal ka tirsan askrta dowladda, waxaana qaar ka mid ah askartaas sameeyeen debadbax, iyagoo la kulmay guddiga difaaca baarlaamanka oo ay u gudbiyeen cabashadooda.
Alshabaab oo iska fogeeyey warqado hanjabaad ah oo welwel ku abuuray shacabka Suuqa Xoolaha